नेपाल आज | साथी एक दिन हामी सबै मर्न पर्छ, मरेको दिन कलम हुन्न- नारायण पौडेल
बिहिबार, २९ साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
पत्रकारितामा रुचि राख्नेका लागि बलराम बानियाँ नयां नाम होईन । मेरो खाश उठबश नभएपनि अग्रजका रूपमा उनी सम्मानित थिए । एकाध भेटमा शालिन दाजुको छाप दिए ।
उनी मरेको समाचारले बेचैनी भयो नै, संगै उनका बारेमा लेखिएका समाचार पढेर बैराग लाग्यो । मानिस मरेको छ, ठयाक्कै कारण के हो थाहा छैन तर समाचारको पेटबोली छ- जाँडले टिल्ल भएर जानी वा नजानी डुबेर मरेको हो। उनको सम्मानमा लेखिएको अबीचुरीजस्तो लाग्ने समाचारमा समेत पेटबोली यही भेटियो । मृत्यु हुनुको कारणका लागि आधिकारिक स्रोत छैन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आको छैन ! तर समाचारमा चाहीं जाँड नै कारण हो जस्तो देखियो । मानौ समाचार लेख्नेहरु पनि संगै जाँड खाएर बानियाँ जी संगै डीलसम्म पुगेका थिए ।
अनुसन्धानले मृत्युको कारण बताउने की समाचारले अनुसन्धानकर्ताको टन्टै साफ गरिदिने । बरू केही साना मिडियाले स्थानीयसँग कुरा गरेर सामान्य धर्म निर्वाह गरेका छन, भलै त्यो पनि पूर्ण छैन । स्थानीयले नदीमा हाम फालेको मानिस आफूहरुले नचिनेको बताएका छन । त्यहाँ हाम फालेकै व्यक्ति मकवानपूरमा भेटिएका बानियाँ हुन भन्ने स्पष्ट छ र ? कोही अर्को व्यक्ति नि हुन सक्छ ! नदी किनारमा भेटिएको भनिएको जुत्ता बलराम बानियाँकै हो की होईन भनेर प्रहरी वा पारिवारिक स्रोतसँग बुझेको समेत छैन । हामी आफनै सहकर्मी बारे लेख्दा त मानबीय पक्षको हेक्का राखदैनौं भने अरूको बारे के सम्म गरौंला । साथी, एकदिन सबै मर्न पर्छ, मरेको दिन आफूसँग कलम हुन्न । अरुका बारे लेख्नु अघि यही सोचौं । समाचार सबै ओकेल्ने ठाऊँ पनि होईन ।
पत्रकारिताकै क्रममा निराशामा जकडिएका भनिएका बानियाँ त गए, बाँकी परिवारको मनोबिज्ञान बारे सोच्नु पर्देन ? मर्यादाको केही हेक्का नभएका भारतिय संचारमाध्यम पनि कहिलेकाहीं मर्यादित भएका उदाहरण छन । अटलबिहारी अबिबाहित थिए । उनी एक प्राध्यापक दम्पत्तिसँग औधी निकट थिए । उनिहरुकी छोरीको अनुहार काटीकुटी अटलजी कै थियो । अटलजीले उनलाई छोरीझैं माया गर्थे । तर नभएको नि देख्ने भारतीय संचारमाध्यमले यो प्रसंग मूलतः अनदेखा गर्यो । हाम्रा कलम यति तीखा पनि नहोउन- नमरेकोलाई मार्ने र मरेकोलाई दोब्बर मार्ने ! बानियाँजीको मृत्युको कारण पत्ता लाग्ला ढिलोचांडो, तर बानियाँ पत्रकारिता क्षेत्रमा बाँचीरहने छन । किनकी, उनले लेखेका केही समाचार खोज नमूना र केही समाचार चरम विवादका रूपमा चीरस्थाई छन ! अल बिदा अग्रज बलराम बानियाँ !